forced voting | Burma Election Tracker
forced voting DKBA-SPDC fighting in Karen state spreads to other villages / ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့တွင် DKBA နှင့် နအဖ အစိုးရတို့အကြား ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ရွာသူရွာသားများ ထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်နေရကြောင်း Posted in boycott
No-voters in Mon State abused and fined by village head (မွန်ပြည်နယ်ရှိ မဲမပေးသူများ ဒဏ်ငွေခတ်ခံရ)
A citizen from Mon state reported: "Households from ward No 1 and2from of our village that did not vote were all fined 10,000 kyat each. In addition, village head went to those houses, rebuked household members and got their votes in favor of USDP."
ကျနော်တို့ရွာမှာ ရပ်ကွက် (၁) နှင့် (၂)တို့ကို မဲသွားမပေးခဲ့တဲ့ အိမ်ပေါင်း ၁၅ အိမ်ကို ဒဏ်ငွေ ၁၀၀၀၀ ဆောင်ခဲ့ရတယ်။ မဲတွေကိုလည်း ရွာဥကဌကိုယ်တိုင်းအိမ်လာပြီး မဲစာရွက်တွေပေးပြီး ခြင်္သေ့ရုပ်အကွက်ထဲမှာ အမှန်ခြစ်တယ်။ အမျိုးမျိုးဆဲတယ်။
Voters threatened to vote for the USDP in Pegu Division and told roads would be built if USDP wins (ပဲခူးတစ်နေရာတွင် မဲပေးသူများကို ကြံ့ဖွံ့အား မဲပေးရန်ခြိမ်းခြောက်ပြီး၊ ကြံ့ဖွံ့ အနိုင်ရရှိပါက လမ်းများဖောက်ပေးမည်ဟုဆို)
A voter in Pegu Division said: "I did hear about election. I sawabrochure on my fence. There were lion logo and rice branch logo on them. I returned home and voted. Not that I felt glad but like duty that I had to complete. There were more USDP members persuading voters. They were telling people to vote for them. Guards included firefighters and other officers. Polling station was at the primary school. There wereafair number of voters. There of my family member voted. My grandpa voted for the rice branch (NUP). There are no positive outcomes from voting for the lion (USDP).
USDP collects advance votes in Mon State and threatens those refuse (မွန်ပြည်နယ်တွင် ကြံ့ဖွံ့ကြိုတင်မဲကောက်၊ မပေးသူများကို ခြိမ်းခြောက်)
A villager in Mon State said: "Advance votes were being collected house by house especially from elderly people. Some villagers refused to cast advance votes and they were threatened. It was USDP - in groups of 5-6 people - collecting advance votes."
“တစ်ရွာလုံးမှာ အသက် ၆၀ အထက် အသက်ကြီးရွယ်အိုသူများကို အဓိကထားပြီါ် တစ်အိမ်းတက်တစ်အိမ်ဆင်း ကြိုတင်မဲများ ကောက်ယူခဲ့တယ်။ အချို့ရွာသူရွာသားများက ကြိုတင်မဲပေးဖို့အတွက် ငြင်းပယ်ခဲ့သော်လည်း ခြိမ်းခြောက်ခံရတယ်။ ကြိုတင်မဲတွေ ကောက်ယူတဲ့အဖွဲ့ ကတော့ USDP ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တစ်အုပ်စုလျှင် ၅ - ၆ ဦး ရှိပါတယ်။” မွန်ပြည်နယ်ရှိ ရွာသားတစ်ဦးမှပြောသည်။